September 2014 | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် (Hanns Seidal Foundation)မှ ကိုယ်စားလှယ် MR. Achim Munz ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Sep 29, 2014/
Sep 27, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်း အဝေးကျင်းပ
Sep 24, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာ VISA Worldwide မှ Country Manager Mr. Hiro Taylor ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Sep 23, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း လာအိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းလာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့်စစ်သံရုံး မိသားစုများအားတွေ့ဆုံ
Sep 18, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အာဆီယံပါလီမန်းများ ညီလာခံ ကော်မတီအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်
Sep 17, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ သို့တက်ရောက်
Sep 16, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့် တာဝန်ရှိသူများအားတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များလာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက် တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ တက်ရောက်ရန်နှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိ
Sep 15, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး နော်ဝေနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပါလီမန်ကော်မတီမှ Ms. Anniken Huitfelt နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Sep 12, 2014/
ပည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး နော်ဝေ နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Ms. Anniken Huitfelt ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအစီအစဉ်မှ အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာဟောင်လိုင်း(န်) အားလက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော် မတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနဝန်ကြီး မစ္စတာ ဝမ်ကျားလွေ့ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Sep 11, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဗီယက် နမ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
Sep 10, 2014/
Sep 09, 2014/
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင်(ဟိုချီမင်းမြို့)၊ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Le Thanh Hai နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Sep 08, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
Sep 07, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Troung Tan Sang အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ် The Need Assessment Mission (NAM) အဖွဲ့မှMs.Hiroko Miyamura ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Sep 06, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းဖြူးမြို့နယ်ရှိကော်မတီများ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
Sep 04, 2014/
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်း ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ